DEG DEG+XOG:Muuse Biixi oo wafti deg deg ah u soo diray Garoowe, Isimo & Culumo ay la kulmeen + Madaxtooyada Puntland oo dabalkii ugu cuslaa la dul dhigay kadib markii……. – Puntlandtimes
DEG DEG+XOG:Muuse Biixi oo wafti deg deg ah u soo diray Garoowe, Isimo & Culumo ay la kulmeen + Madaxtooyada Puntland oo dabalkii ugu cuslaa la dul dhigay kadib markii…….
GAROOWE(P-TIMES) – Warsidaha Puntlandtimes.com wuxuu ogaaday in wafdi iskugu jira culumo, waxgarad iyo Isimo ka socda dhinaca Somaliland ay yimaadeen magaalada Garoowe, waana dadaaladii ugu xiisaha badnaa ee ay ku doonayaan in lagu baajiyo dagaal ka dhaca gobalka Sool, gaar ahaana deegaanada ay isku horfadhiyaan Puntland & Somaliland.
Warsiduhu wuxuu ogaaday in ay xubnahan shalay la kulmeen Isimadda Puntland, qaar kamid ah gaar ahaana Isimadda gobalka Nugaal qaarkood oo ay ka wada hadleen arrimaha ku saabsan in la baajiyo dagaal dhaca, nabadna lagu raadiyo xalka rasmiga ah ee dagaaladaas.
Isimada kayimi dhinaca Somaliland waxay u badan yihiin kuwa kasoo jeeda Beesha Habarjeclo ee degan Burco, waxayna xooga saarayaan in lasoo afjaro dagaalkan, waxayna sidaas oo kale la kulmeen xubno horey madax uga soo noqday Puntland oo hadda kusugan Garoowe.
Xubnahan Nabad raadinta hadda u jooga Garoowe, ayaa la rumeysan yahay in ay wadaan qorshe hoosaasin noqon kara, maadaama dhinaca maamulka Hargeysa aysan ka heysan damaanad, haddana horeyba loo ogaa qaarkood oo si cad u sheegayay in Sool ay leedahay Somaliland, taasna ay tahay midda aan laysku fahmi doonin.
Xog ay heshay Puntlandtimes.com waxay daaha ka rogaysaa in ay maanta kulmayaan xubnaha ka yimi Hargeysa iyo culumada Al Ictisaam ee Puntland oo ay ka wada hadlayaan sidii ay qorshahan uga wada duuli lahaayen, waxaana la rumeysan yahay in uu jiray qorshe horey ay kooxdan qeyb uga ahayd oo lagu baajinayo dagaal dhaca.
Dalab ay xubnahan ka yimi Hargeysa u gudbiyeen Madaxtooyada Puntland ayaan helin jawaab rasmi ah, maadaama ay codsadeen in ay la kulmaan Madaxweynaha Puntland Dr Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, balse ma cada in uu aqbalay in kale.
Xog kale ayaa cadeynaysa in uu jiray qorshe ay Madaxtooyadu doonayso in uu xubnahaan qaabilo Madaxweyne kuxigeenka Puntland Eng CabdiXakiim Xaaji Cumar Camey oo ay si wanaagsan isku garanayaan, horeyna u sheegay in Isimadan looga baahan yahay in ay nabadda ka bilaabaan maleeshiyadooda oo ay kala baxaan Tukaraq.
Arrinta Xiisaha leh ayaa ah in aysan xubnahan ilaa hadda la kulmin Isimada ka soo jeeda gobalada Sool, Sanaag & Cayn ee kusugan Garoowe, taas oo ka dhigan in aysan waxba u aqoonsaneyn, waxaana deegaanada lagu gorgortamayo iska leh codkooda u dambeeya ee nabad raadinta Isimada ka soo jeeda oo uu hogaaminayo hadda Garaad Saleebaan Garaad Maxamed oo si cad u sheegay in uusan nabad qaadan doonin.
Dawladda Puntland waxay shacabkeeda u sheegtay marar badan in aan la fursan doonin howlgal Milateri oo dib loogu xoreynayo gobalka Sool, markii Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi bishii January 2018 duulaan toos ah ku soo qaaday Tukaraq, maalin kastana Hanjabaada iyo hadalada qaabka daran u dheer yihiin shacabka deegaanadaas oo si toos ah loogu haysto Afduub u muuqda Gumeysi cusub.
FAAHFAAHINTA XUBNAHAN WIXII AY LA KULMAAN KALA SOCO HALKAAN